IINGCINGA ZOLUHLU LWEKHITSHI ENTOFONTOFO (IIKHABHATHI ZESIKO ICANDELO 3) - UYILO LWEKHITSHI
Eyona uyilo Lwekhitshi Iingcinga zoLuhlu lweKhitshi eNtofontofo (iikhabhathi zesiko Icandelo 3)
Iingcinga zoLuhlu lweKhitshi eNtofontofo (iikhabhathi zesiko Icandelo 3)
Le yinxalenye ye-3 yemibono yoyilo lwethu lwekhitshi kunye neekhabhathi zesiko zegalari yezithombe. Ungafumana ( Izimvo zasekhitshini icandelo 1 ) kunye ( Izimvo zasekhitshini icandelo 2 Kweli phepha. Siyathemba ukuba uyonwabele le khitshi intle kunye nekhabhathi zesiko, ogqityiweyo obutofotofo, izibane ezintle kunye nezakhiwo ezivulekileyo njengoko sisenza.
Kumfanekiso ongasentla kwendibaniselwano yeenkcukacha zokwakha zakudala kunye neziqwenga zekhitshi ze-antique zenza indawo ekhupha umtsalane weklasikhi kunye nenhle. Izibane ezintle zekristale ezihombise isilingi esimthubi-emthubi kwaye zingqongwe yiringi entsonkothileyo, ngelixa imigangatho yeeslabs ezinkulu zeethayile zamatye endalo zesibheno esingaphezulu.
Iikhabhathi eziphambili zekhitshi zikwisiphelo esimthubi esikhanyayo esihambelana nombala weendonga, ngelixa iikhabhathi ezime simahla kunye neekhawuntari ziza ngeentlobo ezahlukeneyo zamaplanga. Kukho ikhabhathi enkulu yeWalnut enebhawuntara yokuthelekisa kunye nezitulo ezi-4 zebar, a Iikhabhathi zokhuni zecherry kunye nekhawuntara ebomvu yesiqithi se-mahogany kunye ne-green granite counter top.
Iikhabhathi eziCwangcisiweyo zeKhitshi
Eyona ndawo kugxilwe kuyo eli khitshi iya kuba ziikhabhathi ezikhethekileyo ezingwevu-luhlaza ezinemibala eluhlaza kunye nenobuhle eneenkcukacha zegolide. Ezi khabhathi zintle zihambelana nombala weplanga eliseludongeni kwaye zinceda ekuphuculeni ubuhle beemephu zokubala zeMaple. Ezinye iziqwenga zefanitshala ezakhelweyo zikwapeyinti ngombala ongwevu-luhlaza njenge-nook encinci yesidlo sakusasa ngefestile. Iithayile ezimnyama ze-ceramic zokwenza i-backsplash zongeza kwinkangeleko entle, ngelixa ukuxhonywa kweembiza, iipani kunye neebhasikithi kunika indawo isibheno se-rustic kunye nekhaya.
An Ikhitshi elivulekileyo esebenzisa ikhabhathi yale mihla eMahogany laminate. Zonke iikhabhathi zasekhitshini zisebenzisa ukugqitywa okufanayo okune-laminate kwaye zisebenzisa i-countertop ye-beige granite efanayo ehambelana neethayile ezibuyela umva kwi-beige kunye ne-cream mosaic. Ikhawuntara yesiqithi ifaka i-barstools zentsimbi ezi-5 nge-velvet upholstery emnyama kwaye ikwasebenza njengeyona ndawo iphambili yokuhlamba izitya ekhitshini.
Ngaphandle kokusebenzisa ikhabhathi emhlophe yesimbo esimhlophe, esi sithuba sekhitshi silungelelanisa isitayile sangoku. Isebenzisa iindonga ezimhlophe ezingacacanga kunye neethayile ezimhlophe zomdongwe ezingqongwe ziithayile zeceramic ezimnyama kwimigangatho yayo ukugcina imvelaphi yokungathathi hlangothi kwezinye izinto zesithuba, kwaye ikhitshi livula indawo yokuhlala, iyenza ikhitshi elungele iindwendwe. Iikhabhathi ezimhlophe zasekhitshini zidityaniswe nesitrabha esityebileyo setafile yetyuwa kunye nepepile eneflethi eneflethi yesibheno sanamhlanje sokutshatisa izixhobo zentsimbi yanamhlanje.
Eli khitshi likhulu linobushushu obufudumeleyo ngaphezu kwako konke ukukhanya okuchaphazeleka kukhetho lwalo lwezibane kunye nezinto zaphantsi. Imigangatho isebenzisa iiplanga zoqalo ezinobukrelekrele ngelixa izibane ezisetyenzisiweyo zihlala zimhlophe ngokufudumeleyo, zinika indawo ngombala ofudumeleyo. Ukongeza, iikhabhathi zekhitshi ngokudibanisa ngokudibeneyo zidibanisa iWalnut kwisiphelo sayo sendalo esingafakwanga varnished kunye nokugqitywa kweWalnut, eyenza indawo esebenzisa imibala emininzi yomthi ngelixa igcina imibala efanayo.
Kuyilo lwekhitshi, imbonakalo yesiko ifezekiswa ngokudityaniswa kwezinto zokwakha zesintu ezinje ngemiqadi yeplanga evulekileyo kunye neefestile zaseFrance, kunye neendlela zokugqiba ngokwesiko njengokugqitywa kwepeyinti yemabhile. Iikhabhathi zendalo ze-Oak zasekhitshini zigqiba ukubukeka, kwaye zidityaniswe nemithi yeziqhamo eyenziwe ngobunjineli kunye nekhawuntari yesiqithi ngokugqitywa komnyama omnyama kunye neplathi eqinileyo yamahogany.
Imibala e-Shiny ye-beech eyenziwe ngobunjineli kunye nepeyinti eludongeni etyheli yodonga isebenza njengemvelaphi eqaqambileyo kolu luyilo lwangoku lwekhitshi. Ukufudumeza nokuqaqamba kugqityiwe kugqibezela iityhubhu zomthi wetsheri wekhabhathi kwaye kunceda ukuqaqambisa umnyama imiphezulu yeetafile lenyengane . Ngaphandle koyilo olulula, iikhabhathi zihonjiswe ngobunjani bezithsaba kunye nee-corbels.
Kule khitshi emhlophe emhlophe, upholstery obomvu we-barstools ubonakala utsala umdla wamehlo njengoko umbala wawo umi ngaphandle kwimvelaphi emhlophe emhlophe. Zonke iikhabhathi, kubandakanywa nesiqithi esiphakathi zimhlophe, kwaye neetafile zimhlophe ngaphandle kwetheyitile yokhuni esembindini wesiqithi. Iithayile ezimhlophe zetyhubhu zangaphantsi zongeza ubume kwiindonga zokubuyela umva, kodwa zigcine ziyinyani kwiphalethi emhlophe.
Eli khitshi liya kwisikimu esikhanyayo esikhanyayo. Zonke iikhabhathi kunye nezixhobo zokubala esiqithini zipeyintwe ngombala otyheli kwaye zisebenzisa itafile yokukhanya yegranite yokuhombisa kunye neethayile ezikhanyayo zityheli zecaramic zokubuyela umva kwayo. Nangona kunjalo, isilingi esimhlophe, udonga kunye nemigangatho kunceda ukuthambisa i-yellows, kwaye nezibane ezimhlophe ezipholileyo ziyanceda ukunciphisa iithoni ezifudumeleyo zeekhabhathi.
Ngokufana nomzekelo ongentla, eli khitshi lisebenzisa iikhabhathi zesiko kunye nepeyinti ngombala okhanyayo. Kodwa endaweni yeendonga ezimhlophe, isilingi kunye nemigangatho, le khitshi iya kwimibala emnyama, isebenzisa umbala we-beige ezindongeni nasemigodini enamabala amnyama, yenza umahluko ozisa amehlo akho kwelona lililo lililo kwisithuba esimhlophe Isiqithi sendawo.
Endaweni yeethayile zomgangatho oqhelekileyo, eli khitshi lakhetha ukusebenzisa imigangatho enamabala amnyama endaweni yoko, kwangoko linika indawo ngakumbi ubuntu. Iikhabhathi eziphambili zekhitshi zimhlophe kwaye zimile ngaphandle kumgangatho omnyama. Iingcango zekhabinethi zisebenzisa ii-slats ezime nkqo kwaye ezi zinto zithe nkqo ziphindaphindayo zinceda ekubonakaliseni ukuphakama kweekhabhathi, zibenza babhenele ixesha elide. Zonke izinto zokubala zisebenzisa i-galaxy lenyengane emnyama kunye nekhawuntari yesiqithi esiphakathi iyazahlula kwezinye iikhabhathi njengoko inesiphelo se-oki yendalo kunye nokulinganisa izitulo zebartan.
Inqaku eligqwesileyo lale khitshi luhlobo lwalo olwahlukileyo kunye oluvulekileyo. Nangona ikhitshi ngokwalo alikho likhulu kangako, isicwangciso esivulekileyo sinceda ukwenza indawo ibe nkulu, kwaye siyenze indawo efanelekileyo yokonwabisa kunye nokunceda iindwendwe njengoko ikota yesangqa sayo yesiqithi ivula kwindawo yokuhlala / yokutyela kwaye inendawo yokutya njenge kakuhle. Ngokuphela kokugqitywa kwayo, iikhabhathi zigcotshwe ngokufanayo kwisiphelo esihle somthi weTeak kunye nokudibana kakuhle neetafile zegranite, imigangatho yeplanga ye-Beech kunye neendonga ze-beige.
Le khitshi yanamhlanje yandisa indawo ngokusebenzisa udonga olunye ukugcina, ukudibanisa iikhabhathi, iidrowa kunye nezixhobo ezakhelweyo. Ukugqitywa kwemephu yekoloniyali yeekhabhathi kunee-orenji zangaphantsi ezigcwalisa ubumthubi bomgangatho weplanga ye-beech yobunjineli, ngelixa itafile yetyuwa engwevu kunye nepepile isebenza njengendawo elungileyo yokungathathi hlangothi ukulungelelanisa ukulawulwa kwemibala efudumeleyo kwisithuba.
Indawo yanamhlanje enesitayile sendabuko, eli khitshi liqhayisa ngomtsalane oqhelekileyo kwiikhitshi zesiko. Idibanisa iifom zesiko kunye neziqwenga zefenitshala ngendlela yangoku njengokusebenzisa iikhabhathi zesitayile sendabuko kodwa usebenzisa ii-walnut laminates endaweni yamabala emveli kunye ne-varnish, ukusetyenziswa kwezibane ze-Tiffany Pendant ze-aksenti kunye nokusetyenziswa kweefenitshala zesitayile sexesha (isitulo sebha nezitulo zokutyela). Ukudityaniswa kokugqitywa kwale mihla kunye nezitayile zexesha kunika ukukhanya kunye nokuhlaziya ngakumbi kwisithuba.
Le khitshi yanamhlanje inendawo evulekileyo enxibelelana ngokuthe ngqo nekhitshi kwindawo yokutyela ngokuvula okukhulu. Ikhitshi ngokwalo ligcinwa lilula, kunye nepesika ekhanyayo eyenziwe ngombala weceramic, iikhabhathi ezibomvu ze-oki eziluhlaza kunye ne-emerald green granite countertop ehambelana neetayile eziluhlaza ezisetyenziswe kwi-backsplash. Iindonga ezikhanyayo zityheli zinceda ukwenza indawo ibonakale ikhanya ngakumbi ngaphandle kokusetyenziswa kweethoni ezimnyama.
Ikhitshi elinomtsalane lale mihla liphuma ngaphandle kwesibheno sasekhaya nangona sincinci kwaye silula. Kwabaqalayo, ukujonga okugeziweyo kwemigangatho yeMephu yeNjineli kusebenza njengemvelaphi elungileyo yokunceda ukufudumeza ngakumbi ukubonakala kwekhitshi. Iikhabhathi zilaminishwe ngombala omhlophe, kodwa zivula ukugqitywa kwelaminethi ye-matte endaweni yokuhombisa okuphezulu okuqhelekile kumakhitshi anamhlanje. Oku kubhangqiwe ngetafile yetyuwa kunye nepepile kunye ne-backsplash, enesicelo esikhetheke kakhulu kwisiqithi esisembindini, sisisebenzisa njenge-fascia kwindawo ephezulu yokulwa.
Eli khitshi lenza lula ukujongwa kweekhabhathi zesiko kwaye liguqulele kwiifom zangoku nangokubumba okuncinci kunye nokuhombisa. Iikhabhathi zonke zimhlophe nge-matte kwaye zisebenzisa intsimbi engatyiwa ibrashi ukutshatisa izixhobo zombane ezingenasici. Izixhobo zokubala eziphambili zekhitshi zisebenzisa igranite emnyama ebhangqwe ngombala omhlophe wethayile, ngelixa isiqithi esisembindini sisebenzisa i-carrara marble, sisinika isibheno esihle ngakumbi.
Ukuba neefestile ezininzi kunye nokukhanya kwendalo kusebenza kuluncedo loyilo lwekhitshi njengoko lusebenzisa imithi emnyama kwiikhabhathi zaso zasekhitshini. Imigangatho yeethayile emhlophe yodongwe kunye nokukhanya kwendalo okunesisa kunceda ukulinganisa-ukugqiba ubumdaka bekhabhathi kwaye kukwenze kubonakale kungoyikisi. Uyilo oluvulekileyo lwendawo nalo lunegalelo ekwenzeni ikhitshi liziva libanzi ngakumbi.
Iindonga ezimthubi kunye nemigangatho yeebheyi ye-beech edibeneyo inika umbono ongacacanga wendawo enkulu, kwaye isebenza njengendawo yangasemva enkulu kwiikhabhathi zekhitshi ezinamathanga e-Walnut. Isebenzisa i-countertop ekhethekileyo yegrey kunye nemithanjeni emnyama efikelela kulo lonke udonga lwe-backsplash, ukudala ukujonga okungahambelani. Izibane ezenziweyo ezifihliweyo phantsi kweekhabhathi ezingaphezulu kunye nezibane ezijingayo zinceda ukukhanyisa indawo, ukuyinika ukukhanya okufudumeleyo kunye nokulungiselela ngakumbi ukutya.
Umtsalane wale khitshi kukugqitywa kokuhlanjwa kwee-Oak zayo zeekhitshi zekhitshi ezinika ikhitshi lonke ukukhanya okufudumeleyo kunye nesibheno esincinci. Iithayile ze-ceramic ezimenyezelayo ze-floros zinceda ukunika indawo isibheno esicace ngakumbi, kwaye izibane ezimhlophe ezifudumeleyo ezisetyenzisiweyo zinceda ukunika umbala oshushu kwiindonga ezimhlophe ezimhlophe. Imiphezulu yeetafile ze-beige zihambelana nombala weekhabhathi ezishiya izibane ezixhonyiweyo ezingaphezulu kwesi siqithi ziphikisana nombala owamkelekileyo wombala ekhitshini.
Iinkcenkce ezibunjiweyo kunye neenkxaso ezijikiweyo zinika eli khitshi isibheno esihle kunye nengqwalaselo yalo kwiinkcukacha, kodwa iyenza ingoyiki kangako ngokukhetha ukusebenzisa umbala ogqibe umbala omhlophe endaweni yokugqitywa komthi. Oku kudityaniswe neetafile zetyuwa kunye nepepile ezihambelana ngokusondeleyo nokuhombisa kweekhabhathi kunye neethayile ezimnyama ezingwevu ezisetyenziswe kwi-backsplash. Iikhabhathi zinembonakalo yokudakumba kancinci ngaphandle kokuba zingoyiki kakhulu ukuba zinike indawo yokuphekela yaseFrance.
Yinto entle yanamhlanje ikhitshi leplanga elimnyama esebenzisa indibaniselwano eyahlukileyo yemibala kwaye igqibe ngokungaqhelekanga kwiikhitshi zesitayile sendabuko. Kwabaqalayo, iindonga zekhitshi ziyazahlula kuyo yonke indlu njengoko zisebenzisa umbala omdaka wepeyinti omnyama ofikelela phezulu eluphahleni. Umdibaniso wesibane esibhakabhakeni kunye nemifanekiso emikhulu yefestile inceda ukukhanyisa ii-laminates ezintle ze-Oak zephondo ezinombala obonakalayo obusetyenziswa kwiikhabhathi zasekhitshini. Izixhobo zokubala zisebenzisa umphezulu omnyama oqinileyo kwaye zidityaniswe ngeethayile zamatye ezimhlophe ezingwevu zangasemva. Ukugqitywa kwesinyithi esingenasici sezixhobo zombane, izibane ezijingayo kunye netafile yokutyela kunye nezitulo zinceda ukugqibezela ukubukeka kwale khitshi.
Kuyinto engaqhelekanga kumakhitshi aneekhabhathi zesitayile sendabuko ukuba zisebenzise iindonga ezinemibala eqaqambileyo, kodwa olu luyilo lwekhitshi luyozama ukwahluka ekusebenziseni ngokungagungqiyo kweLime iindonga eziluhlaza ezongeza umbala odlamkileyo kwiikhabhathi ezimhlophe zasekhitshini. Isiqithi esisembindini sizahlula kwizixhobo zokubala eziphambili njengoko sisebenzisa ii-Oak laminates kwaye siyadibanisa nezixhobo zentsimbi zentsimbi zanamhlanje.
Ukuthatha imilo engaqhelekanga, phantse engunxantathu, le khitshi inika iinkuni ze-mahogany kunye neencopho zegranite. Nokuba inemilo engaqhelekanga ilula kuyilo, ibonakaliswe ngokusebenzisa imigca emide ethe nkqo, kunye nokusebenzisa amaqhina alula kunye nokubumba. Isiqithi sasekhitshini sikwasetyenziswa njengendawo yokutyela apho abantu banokuthi batye isidlo sakusasa kusasa, bathathe isidlo esikhawulezayo, basele ikofu, njl njl. Isiciko, kusetyenziswa izitulo ezimnyama zentsimbi ezenziwe ngentsimbi nezihlalo eziphakanyisiweyo. Ikhitshi, ubukhulu becala ngokhuni, ibonelela ngokungafaniyo ngokuchasene nendawo yokuhlala ikakhulu eblowu kwaye imhlophe ngombala. Yiyo loo nto kudala ulwahlulo olucacileyo phakathi kwendawo yekhitshi kunye nendawo yokuhlala ngaphandle kokuba ikhaya liyilo lendawo evulekileyo.
Eli khitshi lilahla ngokupheleleyo ukusebenzisa iikhabhathi ezingaphezulu, lisenza sibonakale sibanzi kwaye sicocekile. Elinye icala lekhitshi lingaphakathi kwendawo eseludongeni ekongeza kuyo ukuze ibonakale kwaye ibonakale iphangalele, kuba akukho zixhobo ziphumayo eludongeni. Kananjalo eli khitshi lihamba nemibala engathathi hlangothi kuyilo olulula ngakumbi, lisebenzisa iinkuni ezingapeywanga kulungiso, igranite emhlophe yokuphamba kunye nepeyinti emhlophe yeendonga. Nangona kunjalo, isasebenzisa ukubumba ukunika ikhitshi ubungangamsha obuthile. Ikhitshi libekwe kufutshane nezinyuko kwaye lisebenzisa indawo efileyo njengepani.
Sebenzisa iikona ezijikeleziweyo, ikhitshi lidala ukuhamba okungaphezulu kokugcwala kwabantu okanye ukubona. Ikwayindlela yokhuseleko kubantwana (okanye nabantu abadala) abathambekele ekubetheni iikona zekhitshi. Iikhabhathi ezingaphezulu zenziwe ngeglasi yefayibha yokugcinwa ngokulula kunye nokugqitywa okufana neglasi. Umbala wekhitshi ungumbala omhlophe kwaye usebenzisa marble omhlophe kwiikhawuntari zokubala. Umgangatho owenziwe ngamatye uwunika indalo / imvakalelo yangaphandle edityaniswa sisibane esihle esibhakabhakeni, ngqo ngaphezulu kwesiqithi, sivumela ukukhanya kwendalo ekhitshini, kwaye konga nombane.
Ikhitshi elikukhumbuza iikhampini zeenkampu, iiplanga ezenziwe ngomthi zinika le ndawo imvakalelo yokufudumala kunye nokufudumala. Iincopho zokubala ezimhlophe zegranite zinika umahluko olungileyo ngokuchasene neenkuni ezisetyenziselwa ukulungiswa. Uluhlu lwe-hood, olupeyintwe mhlophe ngemiphetho enamathiselwe nge-mahogany, igcina ukuziva kwendalo kwendawo. Ubume bendalo kunye neethayile ezinemibala zinika indawo inkangeleko eqaqambileyo necocekileyo yokukhanyisa indawo ubukhulu becala eyenziwe ngomthi.
Endaweni yokusebenzisa indawo eninzi kwiikhawuntari, le khitshi yasebenzisa isiqithi esikhulu. Isetyenzisiwe iCherry yaseBrazil kwiikhabhathi ezingaphezulu kunye neBrazil Oak yeekhabhathi ukunika umahluko othile kwezi ntlobo zimbini zeekhabhathi. Kananjalo inee-granite ezimbini ezahlukileyo, i-Baltic Brown yesiqithi kunye ne-Kashmere emhlophe yokulwa nodonga. Izibane ezintathu ezilula ezijingayo zisetyenziselwa isiqithi sasekhitshini ukunika ukukhanya okupheleleyo ekuphekeni, kumalungiselelo okutya kunye nasekutyeni.
Oku uyilo oluncinci lwekhitshi ithatha lula ukuhonjiswa kwaye ijolise kwiziphelo ezintle ezisetyenzisiweyo kumphezulu wazo. Ngeethayile ezimhlophe eziphantsi kakhulu kunye neebhodi ezimhlophe zesilingi, utyalomali luya kwikhabhathi. Iikhabhathi zasekhitshini zinee-laminates zomthi weCherry kwaye zisebenzisa iglasi enqabileyo kwezinye iikhabhathi ezingaphezulu. Izibane ngaphakathi kweekhabhathi ezinekhephu zinceda ukubonisa okungaphakathi kwaye, ngokusebenzayo, kwenza kube lula ukukhangela izinto kwikhabhathi xa kumnyama. Ayibambezeli ekusebenziseni i-granite ye-beige njengoko ingafunyanwa kuphela kumphezulu we-countertop kodwa nayo yonke i-splashboard.
Ikhitshi elisebenza ngendlela eqhelekileyo ngokwesiko elisebenzisa iikhabhathi ezimhlophe ezigungxulweyo eminyango kunye netyuwa kunye nepepile yentsimbi. Iikhabhathi ezimhlophe zenza ukuba kube lula ukudibanisa kunye nemibala engqindilili kunye neepateni ezinje ngeetiles ze-cobalt eziluhlaza okwesibhakabhaka kunye nephepha lodonga eliyipateni yeendonga. Ngaphandle kwekhawuntara yesiqithi, le khitshi ikwanendawo yokutya kwasekuseni eyahlukileyo ejonge indawo yokutyela, enekhabhathi ephezulu yokubonisa, eyenza ukuba ikwazi ukulungiselela izidlo ezininzi.
Ukugqitywa okusisiseko kwale ndawo yasekhitshini kugcinwe kulula kwaye kucacile, kusetyenziswa iithayile ezimhlophe zeceramic emgangathweni kunye nepeyinti engwevu yeendonga, kusenziwa iseyile elungileyo yokungathathi hlangothi yokudlala nayo. Ngaphandle kwemvelaphi yokungathathi hlangothi, iikhabhathi zasekhitshini zisagcinwa zilula ngokunjalo, kusetyenziswa iiyunifomu zompayini wepayinifomu yazo zonke iikhabhathi. Izinto zokubala eziphambili zekhitshi zisebenzisa igranite kwindawo yokubeka imiphezulu yeetafile kunye nomqolo obuyela umva, ngelixa ikhawuntari enkulu yesiqithi isebenzisa izinto ezibonakalayo eziqinileyo ezimdaka ngombala.
Oku ikhitshi elisingasiqithi Olunye uhlobo lweplani evulekileyo yekhitshi, kodwa encinci encinci ngobukhulu. Ngenxa yokuthintelwa kwendawo, ukugcinwa kwandiswa ngokudibanisa iikhabhathi kunye needrowa, kunye nezixhobo ezakhelweyo. Iikhabhathi zizinto zomthi oqinileyo waseGlden Pecan, ezinika isibheno sobunewunewu kwaye zisebenzisa i-countertop emdaka yeetafile kunye neethayile zeglasi zokumisa umva.
Olu luyilo lwasekhitshini lwemveli eneseti yokubambisa yamehlo kunye ne-zebra-print upholstery. Ngelixa uninzi lweekhabhathi ziikhabhathi ezimhlophe zemizobo emhlophe, ikwadibanisa nekhabhathi ezinombala we beige. Zonke iitafile zikumabhile omhlophe kwaye zidityaniswe neethayile ezimhlophe ezimhlophe ezingafaniyo nezilinganisa ukubonakala kweetayile zangaphantsi. Isandi sesinyithi esilelweyo sixhonywe ngaphezulu kwekhawuntari yesiqithi esongeza kwisibheno sothando sendawo.
Eli khitshi ludibaniso oluthandekayo lwezinto zesintu nezala maxesha. Iikhabhathi zonke ziyimveli ngokwesiko kuyilo, ngokudityaniswa kokugqitywa kwepeyinti emhlophe kunye nokugqitywa kwemephu yegolide, kunye nokubunjwa kwesithsaba, iingcango zohlobo lwesiFrentshi kunye neengcango ezigungxulwayo kwaye kufakwe izinto ezimnyama eziqinileyo zomphezulu. Iithayile zendlela ezihamba ngaphantsi komhlaba ezimhlophe zazisetyenziselwa ukubuyela umva, kwaye iindonga zikumbala omnyama we-beige. Iziqwenga ezi-3 zezibane ezijingayo zangoku zixhonywe ngaphezulu kwekhawuntara yesiqithi, kwaye iziqwenga ezi-3 zezitulo ezimhlophe zale geometric zisetyenzisiwe endaweni yezitulo zomthi.
izimvo zangasese ezimanzi
Kule khitshi, ukuthelekisa sisitshixo, kwaye kuyabonakala ngokusetyenziswa kweethoni zomthi ezifanayo kumgangatho wayo nakwiikhabhathi zasekhitshini. Usebenzisa oak ogqityiweyo ogqityiweyo kuzo zombini iiplanga zobunjineli kunye neekhabhathi, le khitshi inika imibala ye-rustic isibheno esingaphezulu. Nokuba iikhawuntara zegreyite ezingwevu kunye nokukhanya okumnyama okwenziwe ngamatye e-beige kunegalelo ekubukekeni kwesithuba, ngelixa i-stainless steel iphela kunye nezitulo zebar zomthi ezimnyama zinceda ukugcina iintlobo zokugqibezela kwisithuba.
Ngelixa kuyinto engaqhelekanga, akuqhelekanga ukusebenzisa iphepha lodonga ekhitshini, ukuba iphepha lodonga elisetyenzisiweyo liyakwazi ukumelana nokuvezwa kukufuma. Kwaye le khitshi yenza kanye loo nto, isebenzisa iphepha lodonga kungekuphela kwiindonga zayo, kodwa ukuya kwi-splashboard yayo. Oku kunika ubume ngakumbi kunye nombala ezindongeni njengoko zombini iikhabhathi kunye neetafile zikumbala omhlophe ocacileyo. Igranite emnyama eblowu yesiqithi esiphakathi kunye nemigangatho ye-oki yegolide nayo inegalelo ekongezeni umbala kwisithuba ngokunjalo.
Eli khitshi likhupha imvakalelo efudumeleyo kunye nekhaya ngokudibanisa iinkuni ezinobushushu. Iibhodi zomgangatho oqinileyo wegolide wePecan zihambelana kakuhle nekhabhathi ye-Oak yeplanga kunye neenqwelwana ze-beige granite. Udonga ngasemva kwesinki lunokuvula okukhulu kakhulu, ukuvumela ukukhanya kunye nomoya kudlule kwaye kujikeleze. I-splashboard isebenzisa iithayile zeceramic kunye noyilo oluphakathi kunye nomda, kwaye ikwagubungela ezinye iindawo zodonga ngezitena.
Itafile yamatye e-quartz emnyama esetyenziswe kule khitshi ngokuqinisekileyo intle kwaye iyabamba iliso kule ndawo yasekhitshini. Imiphezulu yeetafile ikhanyiswe zizibane zekhabinethi engaphantsi, ngelixa i-backsplash igqityiwe ngeethayile zelitye ezenziwe ngelitye zinika uyilo ubungqingqwa obungqingqwa ngokuchaseneyo neekhabhathi ezimhlophe ezimhlophe kunye neekhawuntari ezimnyama.
Iplanga lemaple eligqitywe nge-polyurethane lisetyenziselwa ibhloko yesixheli se-butcher. Ngaphandle kwamalungiselelo okutya ikwayindawo entle yokuba sisidlo sakusasa sakusasa. Izibane ezibengezelayo ezijingayo zixhonywe eluphahleni ngetyathanga elinika ukukhanya ngokuthe ngqo kwesi siqithi, ikwangumqondiso wendawo. Iindonga ziyandiswa ngokuba nekhabhathi kunye neekhabhathi ezingaphezulu ziqhuba ubude bayo. I-granite emnyama isetyenziselwa iincopho zokuphikisa ngelixa iindonga zokubala zigqityiwe ngezitena zinika ikhitshi imvakalelo engacacanga.
Uyilo lwekhitshi ngakumbi kwicala elikhulu, ikhitshi linee-walnut-fixtures, kunye nezinto zokubumba ezihombisayo. Esi siqithi sigcina isinki yekhitshi kwaye sisebenzisa i-marble njengesona siphezulu. Icala lesiqithi lisetyenziselwa ukubonisa ingqokelela yomnini weChina okanye ezinye iipleyiti zokuhombisa. Isitulo sebhari yesiqithi sijike imilenze kunye nezinto ezinemigca njengesihlalo saso esinika indawo indawo ethambileyo. I-chandelier yehla ngqo ngaphezulu kwesi siqithi kwaye yongeza umbala ngakumbi kwisikimu sombala esiphantse sabe-monochromatic.
Uyilo lwekhitshi lolweskimu se-monochromatic. Iindonga ze-splash, i-top top, kunye nomgangatho ujongeka ngokufana. Iikhabhathi zipeyintwe cream emhlophe kunye nokubumba kwiingcango zoyilo olongeziweyo. Ikhitshi alisebenzisi siqithi esinika indawo engaphezulu kunye nokuhamba ngokulula kwezithuthi. Iikona zeekhabhathi zenzelwe ukuba zisebenzise ngokufanelekileyo indawo yekona, ixesha elininzi eliba yindawo efileyo.
Kwakhona imodeli yekhitshi yanamhlanje, oku phantse kuyilo lobuncinane. I-quartz emsulwa emhlophe yokuphamba kunye neenkuni zomnatha ukulungiselela izixhobo zasekhitshini. Isiqithi yeyona ndawo iphambili yokulungiselela ukutya, ekwahlala phezulu phezulu. Iikhabhathi ezingaphantsi kwesi siqithi ziye zenziwe ukuba zifumaneke kwiindawo ezininzi zokugcina.
Imigangatho ye-oki yomgangatho weli khitshi libanzi lihamba kakuhle ne-Mahogany ebomvu ebomvu ekhabhathi ekhitshini. Inceda ukukhanyisa indawo, kunye nombala we-beige okhanyayo weendonga kunye nombala omhlophe wesilingi. Kwikhawuntari, kusetyenziswa itafile elula yetyuwa kunye nepepile, kwaye endaweni yesilivere yesiqhelo, izixhobo zegolide zazisetyenziselwa ikhabethe. Izixhobo zonke zimnyama endaweni yentsimbi eqhelekileyo kunye nokugcina umahluko wokugqitywa ubuncinci.
Indawo ebanzi yekhitshi yenze ukuba kube lula ukuba nesiqithi esi-angular. Isiqithi esine-counter top counter kwelinye icala sivumela ukuhlala ngelixa silungiselela ukutya. Nangona ibanzi, ikhitshi linendawo encinci yokubala. Nangona kunjalo, indawo yekhabinethi yanele ngokwaneleyo ekhitshini obu bungakanani. Ukuhamba kwezithuthi ekhitshini kugqwesileyo ngenxa yenani elikhulu lendawo yomgangatho.
Ikhitshi apho unokuyithanda khona indalo engasemva kwendlu. Iifestile zeglasi kunye neminyango yenza ukuba kubonakale ngathi ikhitshi yenye ngaphandle, kwaye iithayile zelitye ziyanceda kule nkalo. Kwelinye icala, isiqithi sekhitshi esenziwe ngomthi kunye nomphezulu wegranite sisebenza njengendawo yokutya. Indawo kwicala lesiqithi ibonelela ngendawo yokugcina okanye yokubonisa. I-granite emnyama isetyenziselwa ukugxininisa iindawo umyili awayefuna ukuba abantu bazibone, njengendawo yesitovu kunye nesiqithi.
Isiqithi sinika ukubaluleka kokuba abantu batye kuso kuba sibonelela ngendawo yemilenze eyaneleyo yokuthuthuzela. Ikhitshi libonelela ngendawo yokugcina kusetyenziswa iikhabhathi kunye nokufihla ikhabhathi kwizixhobo zalo ngokunjalo. Oku kukugcina ukubukeka okucocekileyo kunye okufanayo ekhitshini. Iithayile zomgangatho wamatye zisetyenziselwa ukuziva ngaphandle okanye emaphandleni. Kwaye udonga kunye nombala wethayile ngumthunzi okhanyayo ukugcina indawo ikhanya.
Amakhitshi aneesilingi eziphezulu anokusebenzisa iikhabhathi eziphezulu. Kwaye ukusetyenziswa kwezibane ezijingayo kunceda ekugcineni isilingi singajongi siphezulu kakhulu. Isiqithi sasekhitshini sisebenzisa iikhabhathi ukuze sigcine indawo. Ukuqengqeleka kwesi siqithi kusebenza njengetafile yindawo apho unokutya okanye ulungiselele ukutya xa uhleli phantsi. Ukudityaniswa kweenkuni ezipeyintiweyo kunye nemithi yendalo kunika umnxeba omnandi kwaye kukhanyise ikhitshi. Imabhile emthubi esetyenziselwa iincopho zokubala igcwalisa zombini ukugqitywa komthi.
Le khitshi ibeka phambili kwindawo yekhabinethi, yiyo loo nto indawo encinci yokubala. Indawo ekuphela kwayo yokubala eyenziwe ukuba ifumaneke kumalungiselelo leyo sisiqithi sekhitshi. Udonga, olupheleleyo lweekhabhathi ze-chestnut, lwenza ukuba kube lula ngakumbi ukucoca kunye nekhitshi elilungelelaniswe ngakumbi. Iikhabhathi zifihla iziqwenga ezincinci zekhompyuter ekhitshini. Kwakhona iikhabhathi ezingaphezulu, kuthetha iindlela ezingakumbi zokucwangcisa izinto zasekhitshini. Isiqithi sekhitshi sibonelela ngeekhabhathi ezingaphezulu. I-chandelier yeli xesha isebenza njengekhitshi ekhitshini.
umahluko phakathi kokuphoswa noNksk
Iikhabhathi zasekhitshini zaseVictorian
Izimvo zoyilo lwekhitshi ezihonjisiweyo zihlala zibonisa iikhabhathi zasekhitshini zaseVictorian kuba zombini zintle kwaye zivusa imvakalelo yokuntsonkotha.
Isitayile esisetyenziselwa le khitshi yiVictorian yanamhlanje kunye nomzekelo wokuhamba-ekhitshini okanye egali. Isiqithi sekhitshi sihamba ixesha elide njengekhitshi lekhitshi elichasene nodonga. Ngaphandle kwamalungiselelo okutya, isiqithi sinokusebenza njengendawo yokutya. Isiqithi sinamaplanga ngokupheleleyo, nomzimba upeyintwe mhlophe. Isiphatho sekhandlela sombane sinika umnxeba omninzi wokufezekisa u-Victorian. Iskimu sombala sisebenzisa imibala ethobekileyo yemibala nayo ihlala ithembekile kuyilo lwexesha lama-Victorian.
Ikhitshi elinekhawuntara ye-bay lisikhumbuza ngeXesha lama-Victorian. Eyona njongo yesiqithi sasekhitshini kukutya ngentsasa okanye phakathi kwamaxesha okutya. Iincopho zegranite emnyama zenza ukwahlula okucacileyo phakathi kweekhabhathi ezimhlophe zodaka kunye nodonga olubonakalayo. Iithayile zamatye zisetyenziselwa iindonga zokutshiza. Izityalo zangaphakathi nazo zixhonywe eluphahleni zinganeli nje ukunceda kubuhle kodwa zikwanceda nasekucoceni umoya wasekhitshini. Ukubukeka okumnandi kwekhitshi kuzisa imeko ekhanyayo ekhitshini.
An Ikhitshi elimile L ngesiqithi sekhitshi. Izitulo zibonelelwa ukuze kwenziwe amalungiselelo xa uhleli phantsi, okanye ukutya ngokukhawuleza. Nangona unesiqithi embindini, indawo eyilwe ngokuntsonkothileyo inokufumana ingqalelo yakho xa ungena ekhitshini. I-hood inoluvo loyilo olwahlukileyo, olunokufana ngakumbi nexesha le-Victorian, xa kuthelekiswa nekhitshi liphela.
Olu luyilo lubonisa iikhabhathi zasekhitshini ezilula kuyilo kunye nokubumba okulula. Isiqithi sekhitshi esiphethe uyilo oluthe nkqo, ngaphandle kweekona zeconcave (ezinokuthi zibe yenye indlela yemiphetho ejikeleziweyo yamanyathelo okhuseleko); kwaye ifriji yasekhitshini nayo yenzelwe ukudibanisa nezinye iikhabhathi. Ukongeza umbala kule khitshi izityalo zangaphakathi ziyasetyenziswa. Izimvo zoyilo lwekhitshi ezinemilo eyi-L zihlala zibonisa isiqithi ukwenza indawo yokusebenza eyongezelelweyo kunye nendawo yokutya.
Jonga ifayile Uyilo lweKhitshi eNtofontofo (Icandelo 1) okanye ( Icandelo 2 ) Apha.
log ekhaya iikhabhathi zasekhitshini
imibala yepeyinti yelanga
ubopha njani iqhina
iingoma zothando ezilungileyo zexesha lonke
2 ububanzi begaraji yemoto